ओली सरकारको अर्को सफलता : आजै साँझदेखि डिपाेमै पाईपलाईनबाट तेल आउँन थाल्यो! – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > ओली सरकारको अर्को सफलता : आजै साँझदेखि डिपाेमै पाईपलाईनबाट तेल आउँन थाल्यो!
ओली सरकारको अर्को सफलता : आजै साँझदेखि डिपाेमै पाईपलाईनबाट तेल आउँन थाल्यो!
admin July 19, 2019 बिजनेस	0
काठमाडौ । नेपालमा पाईपलाईनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउँन सुरु भएको छ । नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाईपलाईन तयार भएपछि डिजेल आउँने सुरु भएको हो । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को मातिहारी डिपोबाट दिउँसो २ बजेबाट छाडिएपछि डिजेल आज साँझ ६ बजेदेखि नै नेपाल आयल निगमको बारास्थित अमलेखगन्ज डिपोमा आईपुगेको निगमको अमलेखगन्जस्थित डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले बताए ।
नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि यो काम तिब्र गतिमा अघि बढेको हो ।पाईपलाईनको सबै परीक्षण सकिएपछि डिजेल पठाएको बताए । आइओसीको अनुदानको सहयोगमा बनेको पाईपलाईनबाट आउँने डिजेल तत्काल अमलेखगन्ज डिपोमा भने खन्याईने छैन । डिजेल पाईपमै राखिनेछ । उनले उद्घाटनको दिनमात्र भल्ब खोलेर डिजेल पाईपबाट भण्डारगृहमा पठाईने उनको भनाई छ ।
अगस्ट १५ भित्र उद्घाटन गर्ने तयारी पनि रहेको छ। पाईपलाईनबाट आएको तेल भण्डारन गर्नका लागि अमलेखगन्जको डिपोमा ४ वटा ट्यांकी समेत बनिसकेका छन् । उनका अनुसार २ वटा ट्यांकी ३९ किलोलिटर र २ वटा ट्यांकी ४१ किलोलिटर क्षमताका छन् । उनले नेपालतर्फ ३६.२ किमि पाइपलाइन र भारततर्फ ३२.८ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइएको छ ।
पाइप बिछ्याउने काम सकिएपछि पानी हालेर ‘हाइड्रोलिक टेस्ट’ सुरु गरिएको थियो । उक्त परीक्षण सफल भएपछि तेल ल्याउँन थालिएको हो । पाईपलाईनबाट तेल आउँने भएपछि नेपालको बार्षिक २ बर्ष जोगिनेछ । यसले गर्दा सिमामा बिवादका कारण ट्यांकर रोकिने ,ट्राफिक जाम र पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट जस्ता समस्या समाधान हुनेछ ।
याे पनि हेर्नुसः निर्माता छवि ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । लामो समय प्रेम गरेर यो जोडीले तीन वर्ष अघि गोप्य रुपमा बिहे गरेका थिए । अहिले भने उनीहरु झगडा छताछुल्ल पोखिएको छ । सबै कुरा मिडियामा आएको छ ।अहिले शिल्पाले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेकी छिन् ।यसै बिचमा एक अन्र्तवार्तामा नायिका शिल्पाले आफुलाई फिल्म कर्मीले साथ नदिएको बताएकी छन् । उनले छन् कोही पनि कसैको पक्षमा नबोलेको बताएकी छन् ।
तपाईंमाथि सम्पत्तिको लोभले छुट्टिन खोज्नुभएको छ भन्ने आरोप लागेका ेछ नी भन्ने प्रश्नमा उनले आफुलाईm सबैले यसतो आरेप लगाउको तर त्यो सबै झुट भउको बताएकी छन् । उनले अगाडी आरेप लाउनेलाई भनिन् सायद उहाँहरूलाई थाहा थिएन कि अग्नि साक्षी रोखेर बिहे गरेको मितिबाटै म उहाँकी पत्नी भइसकेकी थिएँ ।
बिहे दर्ता भए पनि नभए पनि परम्परागत बिहे त गरेको हो नि । त्यही मितिलाई कानुनले मान्यता दिन्छ । तर, जहाँ माया छैन, त्यहाँ सम्पत्तिले केही गर्दैन । उहाँलाई मैले त्यही दिन लात्तीले घचेटेर नहिँडेको भए अहिले बोलिरहेको पनि हुन्नथेँ होला । सायद ‘शिल्पाले आत्महत्या गरिन्’ भनेर समाचार आउँथ्यो होला । उनले कसैले मेरो पिडा बुझ्न भन्दा पनि सबै मेरो कान फुटेको छ कि छैन भन्नेतिर गएको बताएकी छन् ।
छविलाई डिभोर्स दिन लागेकि शिल्पालाई करिश्माको यस्तो जवाफ जस्ले सिने जगत नै हल्लियो
यात्रुले खचाखच भरिएको जीप ५० मिटर तल खसेपछि यस्तो दुःखद खबर
राष्ट्र बैंकले किन बैंकहरुको घाँटी न्याक्दैछ, के छ वास्तविक कारण ?
ब्यबसायीलाई घर भित्र थुनेर भ्याट बुझाउन भनेपछि…
लकडाउन लम्ब्याए पनि यी हुन् आजबाट सञ्चालन हुने ४४ प्रकारका उद्योगहरू… हेर्नुस्